အဆိုပါ UNEP Food Waste Index အစီရင်ခံစာ 2021 အစားအစာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း တစ်ခုတည်းမှာ တန်ချိန် ၉၃၁ သန်းရှိပြီး ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍမှ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့အပြင် ရေချိုသုံးစွဲမှုနှင့် ရေဆိုးစွန့်ပစ်မှု နှစ်ခုစလုံးသည် ကြက်ဥပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်လာသည်။
ရေသည် အကန့်အသတ်မရှိသော အရင်းအမြစ်မဟုတ်ပေ၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် နှစ်စဉ် ပိုမိုထင်ရှားလာပါသည်။ အဆိုအရ၊ ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာ့ရေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာ 2019ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေထုတ်ယူမှု၏ 69% ကို စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်နိုင်ပြီး 19% သည် စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ကြက်ဥပြုပြင်ခြင်းကဲ့သို့သော စက်မှုလုပ်ငန်းစဥ်များတွင် ရေသုံးစွဲမှုလျှော့ချရန် အရေးကြီးကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြသည်။
ကြက်ဥလုပ်ငန်းများတွင် စုစည်းမှု တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချခြင်းအပါအဝင် အထွက်နှုန်းနှင့် အလုံးစုံထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု တိုးတက်စေရန်အတွက် ပိုမိုအာရုံစိုက်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ ဤစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် နှစ်ခြိုက်သော ပေးသွင်းသူတစ်ဦးအနေဖြင့်၊ ဤရည်မှန်းချက်ကြီးသော ရည်မှန်းချက်များကို ပြည့်မီရန် မှန်ကန်သောဖြေရှင်းနည်းများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကြက်ဥပရိုဆက်ဆာများသည် ၎င်းတို့၏ အပင်များတွင် တိုက်ရိုက်တွေ့ကြုံရသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို တက်ကြွစွာ ရင်ဆိုင်ရန်လည်း ဆိုလိုသည်။ အဲဒါ ငါတို့လုပ်ခဲ့တာနဲ့ ငါတို့ဘာကြောင့် တီထွင်ခဲ့တာလဲ။ BreakerPro. အထွက်နှုန်းအမြင့်မားဆုံးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖြေရှင်းနည်းများရှိသည့် ကြက်ဥဖောက်ခွဲစက်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ရင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ မျိုးဥထုတ်လုပ်သည့် အပင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အထွက်နှုန်းအမြင့်ဆုံး၊ ဖြစ်နိုင်ခြေအနည်းဆုံး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဆုံး ကြက်ဥဖောက်စက်ကို 1963 ခုနှစ်တွင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ အဆက်မပြတ် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။ ယနေ့အနှစ် 60 ခန့်အကြာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြီးမားသောအတိုင်းအတာဖြင့် ကြက်ဥများကို စီမံဆောင်ရွက်ပုံနှင့် ဤအပိုင်းတွင် စျေးကွက်ဦးဆောင်သည့်နေရာကို ကိုယ်စားပြုသည့်နည်းလမ်းကို ဆက်လက်ခင်းကျင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ BreakerPro ဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုလသမဂ္ဂ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပန်းတိုင်များအတွင်း အရေးကြီးသော အတိုင်းအတာတစ်ခုအား ပံ့ပိုးပေးသည့် အစားအစာစွန့်ပစ်မှု လျှော့ချရေးအပါအဝင် စက်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူများ၏ လုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ သို့သော် ဤရည်မှန်းချက်များအတိုင်း ကြက်ဥဖောက်စက်သည် အသက်ရှင်နိုင်ပါသလား။ ဟုတ်ကဲ့၊ BreakerPro က အဲဒါကို ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သလဲဆိုတဲ့ အချက်4ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ရေဆိုးများထဲသို့ စိမ့်ဝင်ခြင်းမှ ကြက်ဥအဖြူ ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးသည်။ -ချော်နေသော အနှစ်များကို ဖယ်ရှားရန် အနှစ်ကို ထောင့်အသစ်နှင့် အတိမ်အနက်ဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ထုတ်ကုန်များ ယိုဖိတ်မှုနည်းပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ အလင်းပြန်မှုနည်းခြင်းနှင့် အလေးချိန်နည်းခြင်းကြောင့် ပါဝါသုံးစွဲမှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် ကြက်ဥအဖြူစကင်ဖတ်ခြင်းကဲ့သို့သော အားသာချက်များစွာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စတီးလ်ခွက်များအစား အစားအစာတန်း polyethylene ခွက်များကို အသုံးပြုပါသည်။
အခွံမှ ကြက်ဥအဖြူ ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးသည်။ - BreakerPro တွင် အသစ်တီထွင်ထားသော ကြက်ဥအဖြူပြန်လည်နာယူနစ်ကို တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် breaker မှမစွန့်ပစ်မီအခွံများတွင်ကပ်နေသောကြက်ဥအဖြူကြိုးများကိုပြန်လည်ရယူသည်။ ဆယ်ယူထားသော ကြက်ဥအဖြူကို ယခုအတိုင်း စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ စားသုံးဆီအထွက်နှုန်း 0.5% အထိ တိုးလာသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ကြက်ဥကွဲအက်ယူနစ်များတွင် ပေါင်းစပ်ထားသော အခွံနောက်ကျောတွင် အထွက်နှုန်းကိုပင် တိုးနိုင်သည်။ စုစုပေါင်း 1% အထိ!
သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေစဉ်အတွင်း ရေနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ လိုအပ်မှု လျော့နည်းလာသည်။ - BreakerPro ဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သီးခြားတိုင်ကီနှင့် CIP အတွက် ပြင်ပပိုက်စနစ်အား ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ခြေရာကို လျှော့ပြီး Plug&Play။ ယင်းအစား၊ BreakerPro ၏အောက်ခြေကို ရေလှောင်ကန်အဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကြောင့် ရေ 15% လျော့ချပြီး ဓာတုဗေဒအသုံးပြုမှု 50% လျော့ချပေးပါသည်။ ရွေးချယ်စရာအနေဖြင့်၊ သီးခြားကြိုတင်ရေကန်ကို တပ်ဆင်နိုင်ပြီး ရေသုံးစွဲမှုကို 40% အထိ လျှော့ချနိုင်သည်။
စက်လည်ပတ်မှု ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အတွက် အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေမှုကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။ - HMI သည် 15.6" ရောင်စုံထိတွေ့မှု panel နှင့် RFID ဝင်ခွင့်ကတ်မှတစ်ဆင့် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သည့်အချက်ဖြင့် အလုံးစုံပြောင်းလဲထားပြီး၊ မတူညီသောဝင်ရောက်ခွင့်အဆင့်များအတွက် တစ်ဦးချင်းသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ဖြည့်သွင်းနှုန်း။ထို့ပြင်၊ သင်သည် HMI မှတစ်ဆင့် သင်လက်စွဲစာအုပ်များကို တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး သင်လိုအပ်နိုင်သည့် မည်သည့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဒေတာကိုမဆို သင်ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ထို့ပြင်၊ အပိုအစိတ်အပိုင်းပုံဆွဲခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
BreakerPro သည် ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီး ထုတ်လုပ်သည့် ထုတ်ကုန်အားလုံးကဲ့သို့ တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်သည့်နေရာတွင် စမ်းသပ်ထားသည်။ SANOVO TECHNOLOGY GROUP. စိတ်ပါဝင်စားသော ကြက်ဥပရိုဆက်ဆာများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဆင့်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအကြောင်း ဆွေးနွေးရန်အတွက် ယခုစာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ ဒီ link.